Iintaba-mlilo eziyingozi kakhulu emhlabeni: iimpawu kunye nokubaluleka | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 17/06/2022 10:55 | ijiology
Iintaba-mlilo ziziganeko zendalo ezenzeka xa i-magma evela ngaphakathi eMhlabeni ifikelela kumphezulu. Ezi meko zenzeka kwiindawo ezithile nangamaxesha athile. Ikakhulu ixhomekeke kwindawo yempazamo kwaye ingaba iintaba-mlilo ezisebenzayo okanye ezileleyo. Ngoko ayizizo zonke iintaba-mlilo ezifanayo, zinemilo eyahlukeneyo, iintlobo ezahlukeneyo ze-lava kunye nogqabhuko-dubulo olwahlukeneyo olunamandla ahlukeneyo. Ezona ntaba-mlilo zininzi zigqalwa njengezona ntaba-mlilo ziyingozi ehlabathini.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi iintaba-mlilo eziyingozi kakhulu emhlabeni kwaye zeziphi iimpawu zazo.
1 Iimpawu zeentaba-mlilo
2 Eyona ntaba-mlilo iyingozi kakhulu emhlabeni kunye nedatha yomsebenzi wabo
2.1 IVesubio mont
2.6 Intaba yomsinga
2.9 ISaw eNtsundu
Khumbula ukuba, ukuvela kweentaba-mlilo akuzenzekeli. Indawo yayo idla ngokugqitywa ngokuqhekeka kwamacwecwe e-tectonic, iindawo ezahlukeneyo ezenza i-lithosphere. La macwecwe ayashukuma njengoko edada phezu kwengubo engamanzi ngaphakathi eMhlabeni. Xa zingqubana omnye nomnye, okanye xa enye ihlukana kwenye, i-magma yenziwa ukongeza kwintshukumo eyisiphumo. I-Magma lulwelo olushushu olwakha ingaphakathi lengubo. Kumaqondo obushushu aphezulu, iye ithande ukujonga iindawo zokuphuma, ekugqibeleni iyivumele ukuba isebenzise nasiphi na isithuba esikhoyo kuqweqwe loMhlaba ukufikelela kumphezulu. Xa oko kusenzeka, kulapho kuvela khona iintaba-mlilo.
Nangona kunjalo, ugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo ayikuko ukudubula kwe-magma ngokuqhubekayo. Ngalo lonke ixesha intaba-mlilo ikhupha i-magma embindini wayo, kuthiwa kuye kwakho ugqabhuko-dubulo. Ugqabhuko-dubulo luxhomekeke ikakhulu kwimisebenzi yangaphakathi yoMhlaba. Ngale ndlela, sinokufumana iintaba-mlilo ezisaqhumayo nezingasebenziyo ngokuxhomekeke kumathuba ogqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo. Ngokusengqiqweni, ezona ntaba-mlilo ziyingozi kakhulu emhlabeni ziya kuba ziintaba-mlilo ezisebenzayo, njengoko kunokwenzeka ukuba zivelise ugqabhuko-dubulo lwemagma olunokonakalisa indawo ekufutshane.
Noko ke, oko akuthethi ukuba iintaba-mlilo ezileleyo azinakwenzeka oku, ekubeni iintsika ezivumela le magma ukubaleka zisoloko zikho. Kwakhona, iintaba-mlilo zikholisa ukuba nogqabhuko-dubulo olumangalisayo emva kwexesha elide lokungasebenzi ngenxa yokuba lwenzeka kwimithamo emikhulu ye-magma egcinwe ixesha elide.
Eyona ntaba-mlilo iyingozi kakhulu emhlabeni kunye nedatha yomsebenzi wabo
Le ntaba-mlilo imi kunxweme lwaseItali, kufutshane kakhulu nesixeko saseNaples. Yintaba-mlilo eyaziwayo ukususela ngenkulungwane yokuqala ye-AD Yayinoxanduva lokungcwatywa kwezixeko zaseRoma iPompeii kunye neHerculaneum. Okwangoku, ithathwa njengentaba-mlilo ezolileyo. Eyona nto iyingozi kakhulu kunayo nayiphi na enye into, njengoko izazinzulu zisithi iintaba-mlilo eziqhuma ixesha elide zinomonakalo omkhulu.
Enye intaba-mlilo enkulu eItali yiNtaba iEtna, eseSicily kuLwandle lweMeditera. Ngo-1669, kwabakho ugqabhuko-dubulo lwentaba-mlilo esona sixeko sikhulu kulo mmandla, iCatania. Ngo-1992, olunye ugqabhuko-dubulo olufanayo lwatshabalalisa inxalenye enkulu yesiqithi, kodwa ngethamsanqa aluzange lufike esixekweni.
Le ntaba-mlilo ifumaneka eCongo. Yenye yezona ntaba mlilo ziqhumayo namhlanje. Kwafa abantu abaninzi xa kwaqhambuka intaba-mlilo ngowe-1977. Kwakhona, ngowama-2002, ugqabhuko-dubulo lokugqibela, kwafa abantu abangama-45 ukongezelela ekutshabalaliseni izakhiwo ezininzi kwiidolophu ezikufuphi.
Le ntaba-mlilo yase-Indonesia yenye yezona ntaba-mlilo zisebenzayo kwiplanethi yonke. Izazi ngentaba-mlilo ziye zabala ukuba umsebenzi wayo ubangela ukuba igqabhuke rhoqo emva kweminyaka eli-10 okanye ngaphezulu. Ngo-2006, ugqabhuko-dubulo lokugqibela lwabulala amawakawaka abantu ababehlala kufutshane.
Enye intaba-mlilo, ekwafumaneka eIndonesia, iphantse yasebenza njengeMount Merapi. Ugqabhuko-dubulo lwalo lokugqibela lwalungowama-2002, lubangela umonakalo kwimida enkulu yomda. Kanye kunye nokufuduka kwabaninzi abahlala kufuphi, nangona umonakalo womzimba ungaphantsi kakhulu.
Yintaba-mlilo ebekwe kwiSiqithi saseCanary saseTenerife (eSpain). Okwangoku, ihlelwa njengentaba-mlilo eleleyo. Nangona kunjalo, xa ivuka, inokuba nemiphumo eyintlekele kwisiqithi sonke, iingcali zentaba-mlilo zithi. Asinakulibala ukuba iiCanary Islands zenziwe ngeziqithi ze-volcanic, ezisinika ingcamango yamandla ale nto.
Le ntaba-mlilo ifumaneka eJapan, ngakumbi kwisiqithi saseKyushu. Yivolcano esebenzayo kwaye igqibele ukudubula ngo-2009. Ukongeza kwiingozi ezibangelwa ubukho be-volcano ngokwayo, sithetha ngeendawo ezinomlinganiselo ophezulu kakhulu wabemi, okwandisa umngcipheko wokuba i-volcano iya kuthintela umsebenzi wokufuduka. .
Ifumaneka eMexico, iikhilomitha nje ezingama-70 ukusuka kwiSithili soMdibaniso, intaba-mlilo sisoyikiso sokwenyani xa kuqwalaselwa abemi besi sixeko sikhulu. Ngapha koko, iPopocatepetl yenye yeentaba-mlilo ezingaphezu kwama-20 ezisasazeke kwi-Aztec National Geographic, kwaye ngenxa yokuba ihlala phakathi kwamacwecwe etectonic asebenzayo, iphawulwa ngomsebenzi wayo omkhulu we-seismic.
Ukuqukumbela uphononongo lwethu lweyona ntaba-mlilo iyingozi kakhulu emhlabeni, kusafuneka sikhankanye iSierra Negra kwiZiqithi zeGalapagos. Ngenye yezona ntaba-mlilo ezisebenzayo eMhlabeni kwaye ukuqhuma kwayo kokugqibela kwenzeka ngo-2005. Kule meko, akufuneki sithethe ngengozi ebeka kuyo abantu, kuba iiGalapagos Islands azinabantu abaninzi. Noko ke, babumba inkqubo yendalo enezinto ezininzi eziphilayo ehlala isongelwa yile ndalo yendalo.
Intaba-mlilo i-Eyjafjallajökull, i-titan engaphezu kwe-1.600 leemitha ngaphezu komphakamo wolwandle, ihleli kumkhenkce yaye ibisoloko isebenza kule minyaka iyi-8.000 idlulileyo. Kuye kwaba neziqhushumbisi ezahlukeneyo kwiinkulungwane, eyona nto ibalaseleyo kugqabhuko-dubulo lokugqibela ngo-2010. Ukukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo kuye kwagcina umntla Yurophu ehlola, ayikwazi ukusebenza ngenxa yokunqunyanyiswa kwe-volcano yothuthu, ukunyanzelisa ukucinywa kwamakhulu eenqwelomoya iintsuku. Ukuba ufuna ukuhlola le ntaba inkulu, unokulandela indlela ekunxweme olusemazantsi e-Iceland.
Kwi-Izta-Popo Zoquiapan National Park, kukwakho enye yezona ntaba-mlilo ziyingozi emhlabeni ebizwa ngokuba yi-Iztaccihuatl. Kuthiwa izigebenga ezibini ezithwesa isithsaba kule ndawo yendalo ngabathandi bomthonyama ababini abathwaxwe libali lothando elibi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nezona ntaba-mlilo ziyingozi emhlabeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » ijiology » Iintaba-mlilo eziyingozi kakhulu emhlabeni